EX - ABSDF: ပညာရေးစနစ်စနစ်ကို ဖျက်ဆီးပစ်တာ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ပါ
စစ်အာဏ်ရှင်စနစ်ထောင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို (စ)
ဖျက်သွားတာက...... ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း စီးပွားရေးကို ဖျက်စီးသွားတာက မာ့က်စစ် ဦးဘငြိမ် ပညာရေးကိုဖျက်စီးသွားတာက ဒေါက်တာညီညီ တပ်ဦးကျောင်းသားဟောင်း
၂၀၁၄ ခုမတ်လဆန်းမှာ အမေရိကန်ပြန် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတဦးက လွဲမှားစွာ အလွပ်ကျက်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရေးပညာရေးနိမ့်ကျလာတယ်လို့ ဆိုမိန့်လာတဲ့အတွက်၊ ထင် ယောင်ထင်မှားဖြစ်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ထို့အတွက်၊အများအနေနဲ့ အမြင်ရှင်းရအောင် ဤဆောင်းကိုရေး ရသည်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကို (စ)တင်ဖျက်စီးခဲ့သူဟာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းစစ်အစိုးရခေတ် ၊ပညာရေးဝန် (ဒု)၀န် ကြီးဒေါက်တာညီညီဖြစ်ပြီး၊ ဆက်တိုက်ဖျက်စီးခဲ့သူများကတော့ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ပညာရေးတာဝန် ရှိသူများပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုလိုနီသူ့ကျွန်ခေတ်မှာတောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးဟာအဆင့်အတန်းမှီခဲ့ တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အကြောင်းကအင်္ဂလိပ်တွေက “လစ်ဖရယ်ပညာရေးစနစ်”ကို ပေါ်လစီအဖြစ် ချမှတ်ခဲ့လို့ပါ။ မှန်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုအခစားပြုမဲ့ ပညာတတ် ဗျူရိုကရက်တွေဖေါ် ထုတ်ဖို့ရည်မှန်းသော်ငြားလည်း၊ ပညာတတ်တွေကိုမွေးထုတ်မဲ့ တက္ကသိုလ်ကောလိပ် တွေမှာတော့ လစ်ဖရယ်ပညာရေးစနစ် ကိုသင်ကြားဖေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လစ်ဖရယ်ပညာရေးစနစ်ဟာ မဏ္ဍိုင်(၂) ခုအပေါ်မှာရပ်တည်ပါတယ်။
(၁)ဖက်စုံ၊ ဘာသာစုံ၊ ပညာရေး
(၂)လွပ်လပ်စွာဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်ခြင်းပါ။ Critical Thinking လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဖက်စုံ၊ဘာသာစုံပညာရေးဆိုတာက တက္ကသိုလ်ရောက်တာနဲ့လူ့လောကအတွက်အသုံးဝင်မဲ့ဘာသာရပ်တွေ ကိုထောင့်စုံအောင်သင်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်။ သာမန်ရာဇ၀င်၊ပထ၀ီ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊တို့အပြင်(တွေးခေါ်မှု)အတွက် လိုအပ်တဲ့ဒဿနိက (Philosophy)၊နဲ့အတူ Humanities လူမှုရေးဘာသာရပ်၊Social Science လူမှုရေး သိပ္ပံပညာရပ်များကိုဘာသာစုံယူရပါတယ်။
ပညာရေးမှာဘယ်ပထမဘွဲ့(Bachelor)မဆိုအခြေခံပညာရေးကိုပဲသင်ပေးလိုက်ကြတာပါ။လစ်ဖရယ်ပညာ ရေးကအခြေခံခိုင်ရုံမကအခြေခံကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်သင်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။အမေရိကားမှာဆိုရင်ဆရာဝန်သော်၎င်း၊ဥပဒေဘွဲ့ရဖို့ရာသော်၎င်း၊ ပထမဘွဲ့Bachelor Degreeကိုအရင်ယူရပါတယ်။ ပြီးမှဆရာဝန်လိုင်းလိုက်ချင်သူတွေက GMAT၊ဥပဒေဘွဲ့ယူချင်သူတွေက LSAT စာမေးပွဲဖြေရပါတယ်။ဒီစာမေး ပွဲတွေမှာအမှတ်မှီသူတွေမှဆရာဝန်ဘွဲ့အတွက်ဆေးကျောင်း၊ဥပဒေဘွဲ့အတွက်ဥပဒေကျောင်းတွေတက်ခွင့်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆိုရင်Internship လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်သင်တနှစ်သော်၎င်း၊ (၆)လသော်၎င်းဆင်းပြီးမှ အထူးကုအတွက်Specialties လို့ခေါ်တဲ့အထူးကုဘာသာရပ်တွေကို စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ရောပြီး ဆေးရုံ တွေမှဆက်ပညာစည်းပူးရပါတယ်။ Residency လို့ခေါ်ပါတယ်။ အောင်လာတဲ့အခါ Board Exam လို့ခေါ် တဲ့စာမေးပွဲဖြေကြရပါတယ်။ ဥပဒေပညာရှင်ဆိုရင်လည်း Bar Exam ကိုဖြေပြီးမှအမှုလိုက်လို့ရပါတယ်။ အမှုမလိုက်ပဲကုမ္ပဏီကြီးတွေ မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ စာမေးပွဲအောင်စရာမလိုပါ။ ထို့နည်းတူအင်ဂျင် နီယာဆိုလျှင်လည်း Professional Engineer ဆိုတဲ့(P.E.) စာမေးပွဲဖြေရပါတယ်။ ဥပမာတိုက်တစ်ခု ဆောက်မယ်၊ တံတားတစ်ခုဆောက်မယ် ဆိုရင် P.E. လက်မှတ်မပါပဲဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုပါ။ လူထုနဲ့ထိ တွေ့ရမယ်ဆိုလျှင်၊ ဘွဲ့တစ်ခုထဲနဲ့ မပြည့်စုံပါ။Professional စာမေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ မိမိဘာသရပ် ကိုကျွမ်းကျင် စွာလုပ်စားနိုင်သည့် အဆင့်ရှိမရှိစစ်ဆေးခံကြရပါတယ်။
အဓိက သတိပြုစေချင်တာက ဆရာဝန်တို့လို၊ရှေ့နေတို့လို ပြည်သူကိုကိုယ်စားပြုရမဲ့၊ စောင့်လျှောက်ရမဲ့ ဘွဲ့ တွေမယူခင်၊အခြေခံခိုင်အောင် ပထမဘွဲ့တစ်ခုကို အရင်ယူခိုင်းပါတယ်။ကျယ်ကျကယ်ပြန့်ပြန့်အခြေ ခိုင်အောင်ဖို့ပါ။ပြီးမှ မိမိဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကို အထူးပြုသင်ကြားစေပါတယ်။
လွပ်လပ်စွာဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်ခွင့် (Critical Thinking)
လစ်ဖရယ်ပညာရေးမှာအဓိကကျတဲ့မဏ္ဍိုင်တစ်ခုက ပညာကိုတတ်အောက် (သင်) ပေးလိုက်ရုံကမ၊ ပညာ ကရလာတဲ့ (အသိ) တရားကို အမှီပြုပြီး ပိုင်ခြားဝေဖန်သုံးသပ်တတ်အောင်သင်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဤ ကဲ့သို့သုံးသပ်မှုကို (Critical Thinking) ဟုခေါ်ပါသည်။
ဆရာတွေ၊ ပါမောက္ခတွေဟောကြားလိုက်တာကို လိုက်မှတ်ရုံနဲ့ မရ၊ ကိစ္စတစ်ခုကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ၊ ဘာကြောင့်မြင်သလဲ၊ဘယ်အကြောင်းကြောင့်မိမိထင်မြင်ချက်သည် မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆပါသလဲ၊ ဤတနည်းပဲမြင်သည်လား၊နောက်တနည်းရောမမြင်နိုင်ဖူးလားစသည်ဖြင့် (အတွေး) များကို(တွေးတတ်) အောင်ဆက်တိုက် (သင်) ကြားပေးလိုက်ပါသည်။
အမေရိကန်မှာ Ivy League လို့ခေါ်တဲ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျောင်း တွေရှိကြပါတယ်။ ဟားဗတ် (Harvard)တို့လို ၊ယေးလ် (Yale) တို့လိုအမ်အိုင်တီ(M.I.T) တို့လိုရာဇ၀င်ရော ၊နံမည်ရောရှိတဲ့ နံမည်ကျော်ကျောင်းကြီးတွေပါ။ ဒီလိုကျောင်းတွေကအစ ၊ အစိုးရအထောက်အကူပြုကျောင်းတွေအဆုံး ၊Critical Thinking ကို ဦးစားပေးသင်ကြားပေးကြပါတယ်။
လစ်ဖရယ်ပညာရေးရဲ့ အားသာချက်ကတက္ကသိုလ်ဘာသာရပ်တွေကို တတ်ကျွမ်းအောင်သင်ကြားပေးရုံ သာမက၊မိမိတတ်လာသောပညာတွေကို အသုံးချရာတွင်၊ ရဲရဲတွေးတတ်အောင်(သင်ကြား) ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို(အတွေး) ကိုပါ(အားပေး) သည့်အတွက်၊(တည်ထွင်မှု) ကနောက်ကကပ်ပါလာပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်လို လစ်ဖရယ်ပညာရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ (တည်ထွင်မှု)ကို အားပေးတာကြောင့် ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေသော မိုင်ကရိုဆော့(Microsoft) လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ အဲလ်ပယ်(Apple) လိုကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ပေါ်ပေါက်လာသလို ၊ ကမ္ဘာကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်သော အိုင်ဖုန်း(iPhone) ၊ အိုင်ပဲ့(iPad) တို့ကဲ့သို့ ပစ္စည်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။
သို့သော် Critical Thinking ဆိုတာလျှပ်စစ်မီး ဖွင့်-ပိတ်ပြုလုပ်သလို ချက်ချင်းဖွင့်ချင်လို့ ဖွင့်၍(မရ)နိုင်ပါ။ ပညာရေးစနစ်အတွင်းထဲ့သွင်းပြီး စနစ်အတွင်းကဖေါ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။ (စနစ်)ကို (ပေါ်လစီ)က ဖေါ် ထုတ်ပေးသည်ပါ။ သင်ပြမည့်ဆရာတွေကိုယ်နှိုက်က Critical Thinking ကိုနားလည်ဖို့လိုပါသည်။
ဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်ဟာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပညာရေးပေါ်လစီကိုအမွေခံခဲ့သည်မို့ လစ်ဖရယ်ပညာရေး စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်သလိုရန်ကုန်ဆေးကျောင်းမှအောင်သူများကို အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံတောင်မှ အသိအမှတ်ပြုကြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသတိပြုစရာတစ်ခုက တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ တနည်းအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လမ်းညွှန်ပေါ်လစီ ကို တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကလွပ်လွပ်လပ်လပ်ချပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ အစိုးရကအမိန့်ပေးလို့မရပါ။ ထို့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနှင့်ကျောင်းသားထုကရွေးသောကျောင်းသားကိုယ်စလှယ်များ လည်းပါဝင်ခွင့်ရှိကြပါသည်။
ဒီလိုတက္ကသိုလ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်လွပ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်းက ပညာရေးဆိုတာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြေခံပညာရေးကိုသင်ကြားပေးတဲ့မူကြိုမှ (၁၀)တန်းအထိကျောင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ကြားမှု နည်း နာသာမက ဘာကိုသင်မလဲ ဆိုတဲ့(သင်ရိုးညွှန်တန်း) (Curriculum) ဆိုတာတွေဟာ အလွန်အရေးပါတယ်။ ဒီသင်ရိုး ညွှန်တန်းတွေအပါအ၀င် ပညာသင်ကျောင်းတွေ၏ ဦးတည်ချက်သည် ပညာရေးသက် သက်ကျောင်းသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်လွပ်လပ်စွာ ဆုံး ဖြတ်ခွင့်ရှိရပါ မည်။ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီလက်ထက်၊ ဦးဆောင်ခဲ့ကြသော ဦးနု၊ ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းအစရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀မှ တက်လာ ကြသူများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤလွပ်လပ်ခွင့်ကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်ကြပါသည်။
အဓိကအရေးကြီတဲ့အချက်က ယနေ့ကျောင်းသားများသည် အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ တိုင်းပြည်တည် ထောင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပညာရှင်တွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရတနာတွေဆိုတာကို ဒီမိုကရေစီခေတ်က နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကသဘောပေါက်ြကပါတယ်။သူတို့လည်း ကျောင်းသားဘ၀ကို ဖြတ်သန်း ခဲ့ကြရ သည်ကိုး။ ဒါကြောင့် ရနိုင်သမျှနိုင်ငံခြားအကူအညီယူကာနိုင်ငံခြားပညာတော်သင် လွှပ်ခဲ့ကြပါ တယ်။ ဒါကြောင့် တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတွေဟာ နံမည်ကျော်ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များကပါရဂူ ဘွဲ့ရသူ တွေများကြပါတယ်။
ရာဇ၀င်ပါမောက္ခဒေါက်တာကျော်သက်အင်္ဂလိပ်လိုသင်ကြားပို့ချနေသည်ကို ယနေ့ ယူကျူ့ (You Tube) မှာကြည့်နိုင်ပါသေးသည်။ ကြိုက်သော်ရှိ၊ မကြိုက်သော်ရှိ၊အင်္ဂလိပ်စကားသည် ကမ္ဘာသုံးစကားဖြစ်ခြင်း ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားနှင့် အင်္ဂလိပ်စာတတ်မှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာနိုင်ပါမည်။ယနေ့ခေတ်လို အင်တာနက်လွှမ်းမိုးထားသောခေတ်တွင်အမေရိကန်၏အရှိန်ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာသည်ပိုအရေးပါလာပါသည်။ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်က ကျောင်းသားတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်အတန်းက မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။
ပညာရေးစနစ်ဆိုတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲ ကောင်းလို့မရပါဖူး။ အခြေခံပညာရေးဖြစ်တဲ့ ၊ မူလတန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအထိအဆင့်မှီရပါမယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်က အစိုးရကျောင်းများအပြင် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေဖွင့်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်မြို့မကျောင်းကဲ့သို့မြန်မာဆန်ဆန်ကျောင်းများရှိသလို၊ ခရိယန် သာသနာပြုကျောင်းများတည်ရှိခွင့်ရှိကြပါတယ်။ခရိယန်သာသနာပြုကျောင်းတွေဟာ ကမ္ဘာနဲ့တ၀ှမ်း တည် ရှိခဲ့ကြတာမို့၊ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ကာအဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုဖေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ကြပါတယ်။စာရေးသူတို့ ကျောင်းသားဘ၀က ရန်ကုန်မှာအင်္ဂလိပ်မက်သတစ်နဲ့ စိမ့်ပေါလ် (StPaul) ကျောင်းနှစ်ကျောင်းဟာ အ ကောင်း ဆုံးနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဗမာပြည်မှာပထမဆွဲတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ ဒီကျောင်း နှစ် ကျောင်းက ထွက် ကြတာများပါတယ်။ စာရေးသူကအင်္ဂလိပ်မက်သတစ်ကအောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျောင်း တွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ကို မူကြိုကတည်းက သင်ကြားပေးရုံမကအဓိကကျသောအချက်မှာValue System ဟုခေါ်သော (တန်ဖိုး)ထားရမည့် အရာများကိုပါသင်ကြားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ မလိမ်ရဖူး၊မခိုးရဖူး၊စည်းကမ်းရှိရမယ်၊ အလုပ် ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ရမယ်၊ လူကြီးမိဖကိုရိုသေရယ်ဆိုတဲ့(အသိ) တရားတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက သင် ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
တချိန်ထဲမှာ မြိုမကျောင်းလိုမြန်မာဆံတဲ့ ကျောင်းတွေကလည်း၊ မြန်မာ့ဓလေ့နှင့်အညီတန်ဖိုးထားအပ် သော Value Systems များကိုသင်ကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။အစိုးရကျောင်းများ၏အဆင့်သည်လည်းနိမ့် သည်ဟုမဆိုသာပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အစိုးရ၏အဓိကပေါ်လစီမှာ၊ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ကို အနာဂတ်အသီးအပွင့်များဟုမြင်သောကြောင် မှန်မှန်ကန်ကန်ပြုစုပျိုးထောင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ၏ပညာရေးပေါ်လစီ နှင့် အမြင်
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ၁၉၆၂ခုနှစ် မှာ ပြည်သူလူထုက တရားဝင်ရွေးချယ်ထားသော ဦးနုခေါင်းဆောင်သော အရပ်သားအစိုးရကိုသေနပ်အားကိုးပြီး အာဏါသိမ်းယူခဲ့တာရာဇ၀င်မှာငြင်းလိုမရတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်မှာရာဇ၀င်ရှိတဲ့ တသက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအဆောက်အအုံကိုဖြိုခွဲကာအပြစ်မဲ့၊ လက်နက်မဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့တာလည်းစစ်အစိုးရရာဇ၀င်မှာသွေး(စ)စွန်းရ တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာသူရဲ့စစ်အာဏါရှင်စနစ် ကိုထူထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာ ကျောင်းသူကျေင်းသားများဟာခလုပ်စူးညောင့်သဖွယ်လာဖြစ်နေတယ်လို့ (စ)မြင်လာခဲ့ပါပြီ။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ပညာရေးပေါ်လစီဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ပညာသင်ကြားရေး ထက် အန္တရာယ်ကောင်တွေကို ရှင်းဖို ဦးတည်ချက်(စ) ပြောင်းခဲ့ပြီလို့သုံးသပ်မိပါတယ်။
အစွယ်ကိုလိုသူကစစ်အစိုးရ ၊ အစွယ်ကိုရိုက်ချိုးပေးမဲ့ တောမုဆိုးကို လက်ဝဲတပ်ဦးကျောင်းသားဟောင်း ဒေါက်တာညီညီစီမှာသွားတွေ့ကြလေရဲ့။
ဒေါက်တာညီညီ မတိုင်ခင်အစိုးရရဲ့ ပညာရေးပေါ်လစီအရ (၁၀) တန်းအောင်ရင် (BOC) ကောလိပ်ကိုတက်ကြရပါတယ်။ (IA) အင်တာမီဒတရိပ် (Intermediate) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်ပြီးမှ ဆေးကျောင်း ၊ အင်ဂျင်နီယာကျောင်း၊ သိပ္ပံ(BSc) ၀ိဇ္ဇာ (BA) ၊ Bachelor of Arts –Bachelor of Science ဆိုပြီး ဆက် တက်ရပါတယ်။ အားလုံး အတူတူတက်ကြပြီးမှမိမိဝါသနာပါရာကိ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ စနစ်ကောင်းတစ်ခုပါ။
စစ်အစိုးရသစ်အတွက်ပြဿသနာက ဒီစနစ်အောက်မှာ ပညာစုံအောင် ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို တစုတဝေးထဲထားပြီး ပညာသင်ပေးတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသာတွေစုံရင် ပြဿနာတက်တော့မယ်။
ဒါကြောင့်၊ ဒေါက်တာညီညီက ရွှေဥါဏ်တော်စူးရောက်ပြီး လူကြားကောင်းအောင် ဆိုရှယ်လစ်ပညာရေးစ နစ်သစ် ဆိုပြီးကြွေးကျော်လာပါတယ်။ဒေါက်တာညီညီ ရဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ အာလုံးစုံစုံလင်လင်သင်ကြား ပေးတဲ့ အခြေခိုင်တဲ့ လစ်ဖရယ်ပညာရေးနစ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီး (အထူးပြု) (Specialization) စနစ်ကို ဖေါ်ထုတ်လာပါတယ်။ စာရေးသူ အမြင် အရတော့ (အထူးပြု)စနစ်ကို ဘန်းပြပြီး ကျောင်းသားတွေကို ခွဲထုတ်လိုက်တာပါပဲ။ နောက်အရေးကြီးတဲ့ထူးခြားချက်က(၁၀)တန်းအောင်တာနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာရင်းကို (အစိုးရ) ကိုင်ပြီးကြေညာတာကြောင့် ကျောင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကို အစိုးရက အဆုံးဖြတ်ပြုခွင့် အာဏါကိုဖေါ်ထုတ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။
တနည်းအားဖြင့် လူငယ်လေးတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ အစိုးရလက်ထဲရောက်သွားတာကြောင့် မလိုတဲ့လူငယ် တွေ၊ အစိုးရကို အတိုက်အခံပြုမဲ့ကျောင်းသားတွေ၊အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ သားသမီးတွေရဲ့ အ နာဂတ်ကို အစိုးရအာဏါနဲ့ ဖယ်ရှားချုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့ (အာဏါရှင်စနစ်) ရဲ့ လက်ကိုင်ထုတ်ကိုဖေါ်ထုတ်လိုက်တာပါ။ ဒေါက်တာညီညီရဲ့ စနစ်မပေါ်ပေါက်မှီ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ (ကျောင်း) တွေကရွေး (ကျောင်းသား)တွေက မိမိလိုရာကို လျှောက်ရတာမို့ ၊မိမိလိုရာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။အမေရိကားမှာ ယနေ့အထိ၊ကျောင်းတွေကပဲ၊ ရွေးချယ်သမှုပြုကြပါတယ်။
Aggregate ဖြန်းမျှရာခိုင် နှုန်းအတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဥပမာ (၅)ဘာသာရှိတယ်။ တဘာသာ (၁၀၀)ပေးတယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း အမှတ် ၅၀၀ ရနိုင်စရာရှိတယ်။ (၄၀၀) ရရင် ၈၀%၊ ၄၅၀ ရရင် ၉၀%..တွက်ရတာရှင်းပါတယ်။ ၈၀% သို့ မဟုတ် စုစုပေါင်း ၄၀၀ ရမှဆေးကျောင်းဝင်မယ်ဆိုရင် မြင်သာ၊သိသာရှင်းပါတယ်။
ဒေါက်တာညီညီက အစိုးရအာဏါကို (စု)ယူလိုက်ရုံမက ထိုက်ရိုက်တွက်တဲ့နည်းအစားIL(A) Intelligent Level (Aggregate) ဆိုတဲ့၊ ဘယ်ကကမှန်းမသိတဲ့ (စနစ်သစ်) ကို ဖေါ်ထုတ်လာပြန်တယ်။ ထိုက်ရိုက်နည်း အစား ၊ တဆင့်ခံ နည်းကိုဖေါ်ထုတ်လာတာပါ။တစ်ဘာသာကို အမှတ်(၂၀) စီပေးပါတယ်။ ဥပမာသင်္ချာ ဘာသာအတွက် အမှတ် (၉၀) ရမှIL(A) အမှတ် (၂၀) အပြည့်ရမယ်။ရာဇ၀င်အတွက်ကျတော့ (၇၅) မှတ် ရရင်ပဲIL(A) အမှတ် (၂၀) အပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးရကပဲ၊ သတ်မှတ်ပေးတဲ့ (စနစ်) ဖြစ်ပါတယ်။Arbitary ၊ လိုသလို သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ စနစ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် (၁၀) တန်းကျောင်းသားဘ၀ ကတည်းက အစိုးရက အညှာကိုင်လှုပ်နိုင်မဲ့စနစ်ကိုတမင် ဖေါ်ထုတ်လာသည်လို့ပဲ ကောက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောင်း သား တစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ခုထဲနဲ့ကျောင်းဝင်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည်မဟုတ်ပဲ အဖေရာအမေပါ (NRC) ဖြစ်ရမယ်တို့စသည်ဖြင့် (ပေါ်လစီ) ကို အစိုးရက ပြောင်းခွင့်ရှိအောင်ဖန်တီး ယူသော ညစ်ပတ်သည့် ဦးတည်ချက် (Cynical Agenda) ရှိသည်ဟုစာရေးသူက သုံးသပ်မိပါသည်။ လက်ဝဲ အကျင့်အရ ညစ်ပတ်သည့် အမူအကျင့်တစ်ခုပါပေ။
ခွဲခြားသည် ၊ ခွဲပို့သည်
ဒေါက်တာညီညီ၏ ပေါ်လစီအရ (၁၀)တန်းအောင်တာနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဘ၀ကို အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပြီး ဆေးကျောင်းကအမှတ်အများဆုံး နဲ့ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကဒုတိယအများဆုံး ဆိုလာ တော့ ဒီတက္ကသိုလ်နှစ်ခုမရရင်ပဲ စာမတော်သည့် အသွင်ဆောင်လာပါသည်။ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်ဖြစ်ချင် သလား၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်သလား ဆိုတာအရေးမကြီးတော့ပါ၊ မိဖများဂုဏ်ယူနိူင်ရန်သော်၎င်း၊မိမိကို အထင်မသေးရန်သော်၎င်း၊ အမှတ်မှီက ဆေးနှင့်စက်မှုတက္ကသိုလ်တို့ကိုလျှောက်ရသော ယဉ်ကျေးမှုစိုးကြီးတစ်ခုပေါက်ဖွားခဲ့ပါတော့သည်။ ကျောင်းသားများစိတ်ပါရာသင်ကြားခွင့်ရပြီး ထူချွန်းခွင့်မရှိတော့ပါ။ထို့ ကြောင့် စိတ်မပါပဲ ဆရာဝန်ဖြစ်လာသူတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာသူတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်ပါ။ယနေ့ အထိဆရာဝန်ဘွဲ့ရပြီး ဆရာဝန်မလုပ်သူတွေရှိပါသေးတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက်အလွန်နစ်နာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုမှာ အထူးပြုဘာသာရပ်များကိုခွဲထုတ်လိုက်သဖြင့် ကျောင်းသားများသည် အစိုးရကပို့သော ကောလိပ်အသီးသီးသို့ လွင့်ဆင်ကုန်ကြပြန်သည်။ဤသည်မှာလည်း လူစုခွဲသည့်နည်းတနည်း မဖြစ်နိုင် ပေဖူးလား။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၏စစ်အစိုးရခေတ်၊ ဒေါက်တာညီညီဖေါ်ထုတ်လာသောဆိုရှယ်လစ်ပညာရေးးခေတ်တွင် ကျောင်းသား များကိုသာမက၊ဆရာများကို ထိန်းချုပ်လာပါသည်။ကျောင်းဆရာများသည် စာသင်ရုံ သက် သက်မဟုတ်တော့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်သဘောတရားကိုပါလေ့လာကြရသည်။ရာထူးတိုးရန်အတွက် မဆလပါတီ ကိုဝင်ကြရတော့သည်၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒမှလာသော ဗဟိုဦးစီးစနစ်၏လူတွေကိုချုပ်ကိုင်မှုနည်းပရိရာယ်ကိုသွပ်သွင်းလာခြင်းပါ။
ထို့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆိုရှယ်လစ်အသံအော်ပြီး ရှိရှိသမျှလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းပြန်ရာ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွေအားလုံးပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံရကာအားလုံးအစိုးရကျောင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲကုန်ရာ၊ မြန်မာ နိုင်ငံရှိကျောင်းများသည် စာသင်မှုကိုဦးစားပေးသောစာသင်ကျောင်းများမှဗျူရိုကရက်များ အာဏါနှင့် အုပ်ချုပ်စေခိုင်းသော စနစ်စီသို့ ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။
ကျောင်းများတွင်သာမက၊ကျောင်းသားများကိုဘာသင်မည်ကို ညွှန်ကြားသည့် သင်ရိုးညျွန်းတမ်းကိုလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌါနမှဗျူရိုကရက်များကဆုံးဖြတ်ကာ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနှင့်လိုက်နာစေပါသည်။ ဤ ဌါနများတွင်လည်းလက်ဝဲအယူရှိသောသူများကြီးစိုးထားကြပြန်သည်။ဥပမာလက်ဝဲစာရေးဆရာမောင်စွမ်းရည်တို့လိုလူစားတွေကနေရာယူထားကြသည်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကပုဂ္ဂလိကကျောင်း များကိုခွင့်ပြုရာ၊တစ် ကျောင်း နှင့်တစ်ကျောင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သင်ရိုညွှန်းတမ်းများကို အပြိုင်အဆိုင်ဖေါ်ထုတ်ကြရာ ကျောင်းသားများအတွက်အကျိုးရှိပါသည်။ ယ္ခုတော့ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ရှိရှိပုံစံတူ မဆလလမ်းစဉ်ကို အထောက်အကူပြုမိ (စက်ရုပ်) ကလေးများကို မွေးထုတ်ပေးမည့် (စက်ရုံ) များအဖြစ် ဆိုရှယ်လစ်ပညာ ရေးစနစ်သစ်ကကျောင်းများကိုဖန်တီးဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဒေါက်တာညီညီဖေါ်ထုတ်လိုက်သောဆိုရှယ်လစ်စနစ်သစ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာသိသိသာသာကြီးကျဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ စာရေးသူတို့ကဒေါက်တာညီညီ စစ်အစိုးရကိုပံ့ပိုးရန်အတွက်လက်တဲ့စမ်းလိုက်သောပညာရေးစနစ်အောက်မှာလက်တွေခံခဲ့ရတဲ့ သားကောင်တွေပါ။စာရေးသူက၁၉၆၈ခုနှစ်မှာ(၁၀) တန်း အောင်ပါတယ်။IL (A) စနစ်ရဲ့နောက်ဆုးံနှစ်ပါ။ မအောင်မြင်၍ (၄)နှစ်လောက်နှင့် IL(A) စနစ်ကိုရပ်တန့်ခဲ့ရ ပါသည်။ စာရေးသူစက်မှုတက္ကသိုလ်ရောက်တော့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ရဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်က နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်လွှပ်ထားတဲ့အမေရိကားကဘွဲ့ရထားသူတွေပါ။ နောက်ဆုံး ပါမောက္ခ ချုပ်ဒေါက်တာအောင်ကြီးအပါအ၀င်ဆရာကောင်းတွေအားလုံးအမေရိကားစတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပြန့် လွင့်ကုန်ပါတယ်။ဒေါက်တာညီညီကိုယ်တိုင်ဝန်ကြီးကပြုတ်တော့ကုလသမဂ္ဂမှာအလုပ်ရပြီး အမေရိကားကို ရောက်လာပါတယ်။ သူ (စ)တင်ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီး ကတော့ အဖတ်ဆည်လို့မရတော့ပါဖူး။
စာရေးသူတို့ခေတ်က IL(A) နဲ့ ရွေးတာမို့ ၀ိဇ္ဇာဘာသာမှစာတော်သူတို့လည်းဆေးကျောင်း ကိုရောက်လာ ကြပါသည်။ (၁၀) တန်းမှာ သိပ္ပံအခြေခံပါမလာ ၊ ဘိုင်အိုဘာသာမယူလာကြတော့အတော်အခက် အခဲ ဖြစ်ကြရသည်ဟုနားလည်ရပါသည်။ IL (A) စနစ်ကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်ကြရသည်ပါ။
အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်မှာ (Core) ဆိုတဲ့ အသင်မနေရဘာသာရပ်တွေရှိပါတယ်။ ဒီဘာသာရပ်တွေအပြင်ဖက်မှာ (elected) ဆိုတဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီးတက်နိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေရှိပါတယ်။ထို့ ကြောင့် တဦးနဲ့တဦး ယူခဲ့တဲ့ဘာသာချင်းမတူနိုင်ကြပါ။ Transcript လို့ခေါ်တဲ့မိမိယူခဲ့ရာဘာသာတွေနဲ့ရခဲ့ တဲ့ အမှတ်တွေကိုကြည့်ပြီးမှဘွဲ့ရတဦးရဲ့တတ်ကျွမ်းမှုကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာညီညီရဲ့ဆိုရှယ်လစ် ပညာရေးစနစ်မှာတော့ ဘွဲ့ရသူတိုင်း ပုံတူကလေး တွေကို ထုတ်ပေးလိုက်သည်ပါ။ပေးတာယူ၊ခိုင်းတာလုပ်၊ ပြန်မပြောတဲ့ဆိုတဲ့ ပုံတူဆိုရှယ်လစ်အရုပ်တွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ စနစ်နဲ့ ပညာကိုတတ်အောင်သင်ပေးပြီး (တွေးခေါ်)တတ်တဲ့ (ပညာရှင်) တွေထုတ်ပေးတဲ့ ပညာရေးစနစ်ချင်း မတူညီကြပါ။
ဖက်စုံပညာရေးရဲ့အခြေခံကောင်းမှုကိုဥပမာပေးပါရစေ။ စာရေးသူဟာ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကိုရခဲ့ပေမဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိပါ။အမေရိကားမှာ ကွန်ပြူတာတက်ခဲ့ပြီး မာစတာဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ထဲရောက်တော့ လျှပ်စစ်အင်အင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုင်တာတွေကိုလေ့လာပြီးလက်တွေ့ထမင်းစာရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ATM ဆိုတဲ့ နည်းပညာပေါ်လာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုဖတ်ပြီးတတ်ခဲ့ရတာပါ။နည်းပညာအသစ်ဆိုတော့ တည်ထွင်ရင်း စက်ပစ္စည်း (Products) တွေထုတ်ကြရတာပါ။စာရေးသူအမေရိကားမှာထမင်းရှာစားနိုင်ရုံမက Cisco ကဲ့သို့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလိုမျိုးမှာ အုပ်ချုပ်ရေးနေရာရခဲ့တာ ATM ပညာကြောင့်ပါ။ ဒီလိုနားလည်စွမ်းရှိတာ စက်မှုတက္ကသိုလ်က အင်ဂျင်နီယာအခြေခံကိုရခဲ့ပြီးအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖတ်တတ်ပြော တတ်လို့ရယ်ပါ။ အခြေခံကောင်းခဲ့လို့ပါ။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးက မဆလခေတ်ကိုဇီဝိန်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ နောက်တက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရ (န၀တ) ဟာ စာရေးသူအမြင်အရကျောင်းသားလူငယ်တွေကို ပြဿနာကောင်တွေ၊ အန္တရယ်ကောင်တွေ ဟုသာ မြင်သည်ကမ (ရန်သူ) တွေဟု (မြင်)လာသည်၊ သဘောထားသည်ဟု စာရေးသူခံစားရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားများ(စုဝေး) ခြင်းမပြုနိုင်ရန် ကောလိပ်များကိုမြို့အစွန်များသို့ပို့ဆောင်ကာ ကော လိပ် ကျောင်းမျာစွာကိုတည်ဆောက်လာခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ၊လူစုခွဲရန်သက်သက်ပက်ဖြစ်သည်ဟု စာရေးသူ ကသုံးသပ်မိပါသည်။
စစ်အာဏါရှင်စနစ်ဆိုသည်မှာအာဏါတည်မြဲရေးအတွက် စစ်တပ်ကိုသာ ငွေပုံအော်ရရာ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးအားလုံးကိုဥပက္ခာပြုကာပြည်သူတို့၏စားဝတ်နေရေးကို ဂရုမပြူနိုင်တော့ပါ။ ဦး နေ၀င်း၏ (မဆလ) ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုးကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလည်းချွပ်ခြုံကျကာ လဘ်စားမှုများ သည်လည်းကြီးထွားခဲ့ရပါသည်။န၀တ၊နအဖခေတ်မှာလဘ်စားမှုဟာစနစ်၏ယဉ်ကျေးမှုတရပ်အထိဆုပ်ရုပ်လာကာရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
လောကမှာ ပရမ်းပတာဖြစ်တာကိုအင်္ဂလိပ်ကို Chaos လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီပရမ်းပတာဖြစ်တာကိုလေ့လာတဲ့ Chaos Theory ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီသီအိုရီကဘာဆိုသလဲဆိုတော့အသေခြာလေ့လာရင်ပရမ်းပတာအတွင်း မှာပဲ(System) လို့ခေါ်တဲ့ (စနစ်)ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်တဲ့။အစိုးရ၏လစ်လျူရှုမှုကြောင့် န၀တ ခေတ် မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးဟာ ပရမ်းပတာ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဦးတည်ချက်မရှိ ပျက်စီးနေပါပြီ။ လဘ်စား မှုဟာလည်း အမြစ်တွက်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် (ကျူရှင်) ပေးစားတဲ့ (စနစ်)ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးနားလည်ရရင် ဆရာဆရာမတွေဟာ အတန်းထဲမှာစာ မသင်ကြတော့ဖူး။ ကျူရှင်ဝိုင်းပေးစားပြီး စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေကို ကျူရှင်ဝိုင်းတွေမှာပေးကာ ကျောင်းသာတွေဟာတတန်း ပြီးတတန်းအောင်လာကြတယ်၊ ဘာမှ (မတတ်) ကြတော့ပါဖူး။ (အလွပ်) ကျက်တဲ့ စနစ်ကိုကျော်လွန်ပြီး(ဒါမေး) (ဒါဖြေ) ဆိုတဲ့(မေးခွန်း) ကို (ငွေ)နဲ့လဲစားတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီးပေါ်ခဲ့ရပါပြီ။ ယနေ့အထိရှင်သန် ဆဲပါ။
စာရေးသူတို့ခေတ်အကတက္ကသ်ုလ်ရောက်ရင် ကျူရှင်ဆိုတာ ကြားတောင်မကြားဖူးတော့ပါ။ အတန်းထဲမှာ သင်လိုက်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုအင်္ဂလိပ်စာအုပ် (text books) တွေဖတ်ပြီးနားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်။ ယနေ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာ ဆေးကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများလည်းကျူရှင်ယူ ကြရပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မိန်းမကကျူရှင်ပေးနေတာပါ။ (သိ) လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ စာရေးသူမယုံ ကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်ခင်၊ သက်ရာဆိုင်ဘာသာစာအုပ် အထူကြီးတွေကိုဖတ်ပြီးကိုယ်ပိုင်(အသိဥါဏ်) နဲ့နားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိရပါတော့မယ်။ ဆရာဝန်နောက် ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတွေ ကျူရှင်ယူနေရတယ်ဆိုရင်reference လို့ခေါ်တဲ့ (အညွှန်း) ကိုဘယ်လိုရှာတတ် ကြတော့မှာလဲ။ ဘယ်လိုလူနာတွေကို ကုစားကြတော့မှာလဲ။ ရင်လေးစရာပါ။
စာရေးသူနားလည်သလောက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်မဖြစ်ခင်တက်ရကြတဲ့National Defense College မှာတောင် ပြုစုရတဲ့ စာတန်းတွေကို အပြင်လူတွေကို (ငွေ) ပေးပြီးရေးခိုင်းကြတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိပညာရေးစနစ်ဟာ (ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်မှု)မပြောနဲ့ (ကိုယ်ပိုင်ကြိုစားမှု) အဆင့်မှာမရှိရင် ၊ Critical Thinking လို့ခေါ်တဲ့(ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု) အတွေးဆိုတာကို ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မှာလည်း။
မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးစနစ်ကျဆင်းရတာဟာ၊စစ်အာဏါရှင်စနစ် ကိုအခြခံအုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်အစိုးရ အဆက် ဆက်က ကျောင်းသားထုကိုအန္တရယ်ကောင်တွေ ၊ ပြဿနာကောင်တွေလို့ (အမြင်) ရပြီး (ရန်သူ) လို့ သဘောထားခဲ့တဲ့အတွက် ကျောင်းသားထုကို ပညာသင်ကြာရေးထက်၊ နှိပ်ကွပ်ဖို့ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ရဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့(ရလဒ်) လို့ပဲ စာရေးသူ သုံးသပ်မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာဖတ်ပရိပ်သတ်ကြီးကိုလည်စေချင်တာက၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  ပညာရေးနစ်ကျဆင်းရတာဟာ (အလွပ်ကျက်မှတ်ခြင်း)ဆိုတဲ့ သင်ကြားနည်းကြောင့် မဟုတ်ရပါ။ ဘာသာရေးနဲ့လည်း ဘယ်လိုမှ(မပတ် သက်) ရပါ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ (အားလုံကိုချုပ်ကိုင်) လိုတဲ့ (ဆန္ဒ) နဲ့ ဒေါက်တာညီညီ တမင်ဖေါ်ထုတ်လာခဲ့ တဲ့ “ဆိုရှယ်လစ်ပညာရေးစနစ်” က (စ)ခဲ့တဲ့ (ပေါ်လစီ) နဲ့(တမင်ဖျက်စီး) မှုရဲ့ ရလဒ်ပါ။
အစိုးရဆိုတာ (ပေါ်လစီ) ချပြီး(ပေါ်လစီ) နဲ့အုပ်ချုပ်ရတာပါ။ ပေါ်လစီမှာ(ဦးတည်ချက်) နဲ့ (ရည်မှန်းချက်)ဆိုတာရှိပါတယ်။
ဦးနေ၀င်း (စ) တင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်က ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို (ပညာသင်)ကြားဖို့ထက် (ထိန်းချုပ်) နိုင်ဖို့ကို (ဦးတည်)ခဲ့သည်ပါ။ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာညီညီ မှစ၍ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွ့န်တို့နောက်ဆုံး ချမှတ်ကျင့်သုံးခဲ့သော(ပေါ်လစီ) များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကညာရေး ဟာ လုံးလုံးရေတိမ်နစ်ခဲ့ကြရသည်။(ဘွဲ့) သာရပြီး (စာမတတ်)ကြသော (ဘွဲ့ရပညာမတတ်) များပေါ်ထွက်ခဲ့သည်ကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးကိုသိစေချင်ပါသည်။
ပျက်စီးသွားတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီးကိုပြန်အဖတ်ဆည်မယ်ဆိုရင် ပေါ်လစီနဲ့ပဲ ကုစားရမှာပါ။
အရင်အချင်း ပြည့်တဲ့ ကျောင်းဆရာတွေကိုမွေးထုတ်ရပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေ စားလောက်တဲ့လစာပေးရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ (ကျူရှင်ဝိုင်း) ပေးစားတဲ့စနစ်ကိုပေါ်လစီနဲ့ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေ (ရပ်ဆိုင်း) ပစ်ရပါမယ်။ ဖက်စုံပညာရေး၊ လစ်ဖရယ်ပညာရေးစနစ်ကိုပြန်လည်အကောင်ထည်ဖေါ်ရပါမယ်။အင်္ဂလိပ်စာအတွက် native speakers လို့ခေါ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စားပြောနိုင်ငံကသူတွေကို ဖတ်ကြားရပါမယ်၊စာရေးသူတို့အရွယ် အလုပ်မှအနားယူသွားသူသော နိုင်ငံခြားရောက် ပညာတတ်တွေကိုအနဲဆုံး စာလာသင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရပါမယ်။လာချင်အောင်၊လာနိုင်အောင် (လ၀က) ဥပဒေတွေဖေါ်ထုတ်ပြီး ပေါ်လစီနဲ့ အားပေးသမှုပြုရပါမယ်။
ပညာရေးစနစ်ဆိုတာချက်ချင်းကြီးဖွင့်လိုက်-ပိတ်လိုက် လုပ်၍မရပါ။ အခုချက်ချင်း Critical Thinking ရစေလို့ စိတ်ကူးယဉ်လို့မရပါ။ပေါ်လစီ ကိုဘယ်လိုချပြီး၊ ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖေါ်မယ်ဆိုတာကို နားလည်ရပါမယ်။ အဓိက ကတော့အစိုးရက ဘတ်ဂျက်ချပြီး ရေရည်ပေါ်လစီကိုဆွဲနိုင်ရပါမယ်။
မတ်လ ၁၂ရက် ၂၀၁၄ခု